Horumari bandhigyada ganacsigaaga. Tababarkan, Jeff Bloomfield, khabiir ku ah iibka iyo suuq-geynta, wuxuu ku barayaa sida loo soo bandhigo soo jeedinta qiimaha si habboon oo firfircoon. Soo ogow sida aad xidhiidh ula yeelan lahayd dadka kula hadlaya si aad uga dhigto kuwo soo dhaweeya fariintaada iyo sida loogu dhaqmo kalsooni iyo xirfad dheeraad ah. Jeff Bloomfield wuxuu halkan ku qeexayaa walxaha saameeya soo bandhigid kasta: isha la taabto, luqadda jireed, dhawaaqa iyo muuqaalka guud.
Bandhigyo ganacsi oo guuleystay Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Ganacsi-ganacsiyeedka dhaqaalaha wareegtada ah
horeHorumari sirdoonkaaga dhaqammadaada